Silicon Core Pipe Extrusion Line - Mpanome tsipika fampidiran-tsolika China Silicon Core, Factory –Jwell
Ny akora volavolan-tsolika fototra silicoxn dia polyethylene avo lenta, ny sosona anatiny dia nampiasaina coquefficient silica coefficient silica gel lubricant solid. Ny fanoherana ny harafesina, ny rindrina malefaka ao anatiny, ny fifindran'ny kabla mifono rivotra ary ny vidin'ny fananganana ambany. Araka ny filàna, ny habe sy ny loko samihafa amin'ny fantsona kely dia mifantoka amin'ny casing ivelany. Ireo vokatra dia ampiharina amin'ny rafitra tambajotra fifandraisana tariby optika ho an'ny
làlambe, lalamby sns.
Ny tsipika famokarana dia afaka mahatsapa ny fantsom-pifandraisana marobe amin'ny fotoana iray, ny famelana haingana, ary manarona haingana ny casing ivelany. Ny fampandrenesana, ny fanapahana ary ny famokarana vokatra vita dia fehezin'ny solosaina, miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo sy mahomby.